မေဖန်ဆင်းတဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်: ရင်ထဲကပန်းတစ်ပွင့်အကြောင်း (ဆုံး)
Posted by မေ့သမီး at 1:47 AM
တစ်ခါတစ်ရံမှာ မဖြေဘဲနဲ့သိလိုက်ရတဲ့ အဖြေတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ချစ်ကြသူအားလုံး ရင်ခုန်သံတွေ ထပ်တူကျ ချင်မှ ကျကြတယ်။ ရင်ခုန်သံထပ်တူကျကြသူအားလုံးလဲ ပေါင်းဖက်ချင်မှ ပေါင်းဖက်ရတယ်။ ဒါတွေဟာ ကံစီမံရာလို့ဘဲ ဆိုကြရတော့မှာပေါ့။ လူဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခတွေပေါ့လေ။
ညီမလေးရေ နောက်ဆုံးပိုင်းလေးဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာမကောင်းပါဘူး..ဒါတွေဟာ ကိုယ်ကမတောင်းဆိုပဲ မလိုချင်ပဲ ဘဝဇာတ်ဆရာက ရေးဖွဲ့ပေးလိုက်တဲ့ ကံကြမ္မာဇာတ်ညွှန်းတွေပါပဲလေ..
ကြာရင်တော့ ခံစားချက်တွေ တဖြေးဖြေးနဲ့ အနည်ထိုင်သွားနိူင်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆရမှာပေါ့
ဖတ်လိုက်ရတာ ရင်ဘတ် အောင့်သွားတယ်။
ကောင်မလေး အပြင်ရောက်ချင်မှ ရောက်နိုင်သလို
ကောင်လေးလည်း သောက်ဖြစ်နေမှာ မဟုတ်ဘူး...
မပြီးသေးတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခု လို့ပဲ ခံစားလိုက်တယ်..ဘဝက ဇာတ်လမ်းရှည်ကြီးကိုး...
ဇာတ်ဆရာ ရဲ့ အလိုတို့တွေလိုက်ရုံ
အေးချမ်းမေသီချင်း လေးကို သတိရသွားတယ်။
၀တ္ထုတိုလေး က ကောင်းလိုက်တာ မေ့သမီလေးရေ..
လုံးချင်းတွေ .. ရေးဖို့ ကြိုးစားတော့
မမ က နယ်ကပါ သမီးရေ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်နယ် တခုကပါ
ဖတ်ပြီးတော့ နင်နဲ့ငါသီချင်းလေးကို မဖွင့်ရပဲ ကြားမိပါတယ် ခပ်ပေါ့ပေါ့လေးလွမ်းစရာဖြစ်ပေမဲ့ ငယ်စဉ်ဘ၀တွေကအကြောင်းတွေက မနက်ဖြန်အတွက် လေးလေးနက်နက်စိတ်ကူးစရာတွေလို့ထင်တာပဲ။ လေးဖြူရဲ့အတိတ်မြက်ခင်းစိမ်းကိုရော နားမထောင်ဘူးလား?
you know what!? that was all your false slut for not knowing whether friends or the life time partner is more important...
ဘယ်သူမှန်းတော့ မသိဘူး။ Ar ပြောသွားတာကြည့်ရင် ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်ပေါ့လေ။ မေ့သမီးအတွက်တော့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ချစ်သူဘာကိုရွေးမလဲဆိုရင် နှစ်ခုလုံးမစွန့်လွှတ်နိုင်ပါဘူး။ နှစ်ခုကိုယှဉ်ရွေးစရာ လို့လည်း ဘယ်တုန်းကမှ မထင်ခဲ့ဘူးဘူး။ နှစ်ခုစလုံးက သူ့တန်ဘိုးနဲ့သူပဲ။ ခုနကလို အခြေအနေမျိုးက တစ်မျိုးလေ။ ဘ၀နဲ့ချီပြီး ရွေးရမယ်ဆိုတာမျိုးမှ မဟုတ်တာ။ သာမာန် စိတ်ထားနုတာလေးမျိုးပဲ။
Nice story. I hope it isn't real.
And I agree that you shouldn't have to choose between friends and your partner, or anything else. Your partner should love you for who you are.